Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Bilow noloshaada cusub ee Iswiidhan / Leysin gaari wedid Swiidhan gudeheeda
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 5 5 2020
Adiga waa laguu oggolyahay inaad baabuur ku kaxayso gudaha Iswiidhan xilliga dhamaan wakhtiga aad tahay magan-gelyo doonka. Ka dib markaad hesho sharciga deganaansho ee Iswiidhan waxaad mararka qaarkood liisankaagi baabuurka ku baddeli kartaa liisanka baabuurka ee Iswiidhan. Tani waa inaad ku samaysaa gudaha hal sano kana bilaabantay markii aad gashay diiwaan-gelinta dadweynaha si laguugu oggolaado inaad kaxayso baabuur. Waxaa kale oo ay noqon kartaa inaad adigu u baahantahay inaad akhrisato qawaaniinta taraafikada oo samayso imtixaano cusub si aad u hesho liisanka baabuurka ee Iswiidhan.
Baddelka liisanka baauurka dalka dibediisa loo baddelayo ka iswiidhishka.
Haddii aad haysato liisanka baabuurka ee dal EES ah oo doonaysid inaad liisankaaga baabuurka u baddasho liisanka baabuurka ee Iswiidhan markaasi waxaa lagugu xirayaa dhowr shuruudood. Adigu waa inaad haysataa liisan baabuur oo ansax ah isla markaana aad si joogto ah u degantahay gudaha Iswiidhan.
Haddii aad haysato liisanka baabuurka ee dal ka baxsan EES markaasi ma laguuoggola inaad liisankaaga baabuurka ku baddasho liisanka baabuurka ee Iswiidhan.